Home Wararka Waqtiga la dhaarinayo Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo la shaaciyay
Waqtiga la dhaarinayo Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo la shaaciyay
Guddiga Doorashooyinka heer federaal ayaa shaaciyay waqtiga la qabanayo dhaarinta Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka 11-aad.
“Waxaan halkan idinku wargelinaynaa in maalinta Khamiista 14-ka April, 2022 ay tahay maalinta la qabanayo munaasabadda dhaarinta Xildhibaanada cusub.
Waxaan Xildhibaanada Sharafta leh ka codsaneynaa in Saacaddu markay tahay 10:00AM, ay isugu yimaaddaan Hoolka Teendhada ee Afisooni.
Waxaana si xushmad leh idiinka codsaneynaa inaad ilaalisaan waqtiga islamarkaana aad u soo diyaar garowdaan Munaasabaddaas”.
Next articleQoor Qoor oo lagu eedeeyay in uu caqabad ku yahay Dhaarinta Xildhibaanada Koofur Galbeed
121 qof oo lagu helay ku lug lahaanshaha qorshe lagu afgambin...
Golaha amaanka oo baaq u diray Madaxda Soomaalida & soona dhaweeyay...